Home » Akụkọ ụgbọ elu » Turkish Airlines chọrọ ịbawanye njem na Palestine
Onye isi ala Turkey bụ Recep Tayyip Erdogan akwanyewo ndị Alakụba ume ka ha gaa Jerusalem, ọkachasị na US na-ebugharị ụlọ ọrụ nnọchi anya obodo ya n'obodo ahụ.
Onye isi oche nke Turkish Airlines maka ire ahia Muhammed Fatih Durmaz zutere Mịnịsta Ala Palestine nke njem nleta na ihe ochie na Rula Ma'ayah na Satọde na Betlehem.
Dabere na ụlọ ọrụ mgbasa ozi Turkey nke Anadolu, "Turkish Airlines dị njikere maka nkwado maka ịkwalite njem nleta na Palestine."
Ankara bu onye nkwado nke ndi Palestine ma nwee mmekorita ya na Hamas na Gaza. Turkey bụ otu n'ime ndị isi na-akatọ nnabata US maka Jerusalem na afọ gara aga.
Dị ka akụkọ si kwuo, Durmaz gosipụtara mmasị na nkwado "ịkpọbata ọtụtụ ndị njem nleta na Palestine." Ihe karịrị 130,000 ụmụ amaala Turkey gara leta mpaghara ndị Palestian na-achịkwa n'afọ gara aga, akụkọ ahụ kwuru. Amọn News kọrọ na Ma'ayah tụlere mkpa mmekọrịta dị na Turkey na Palestine na "ịma" nke Turkey na nsogbu Palestian.
Akụkọ ndị ọzọ kwuru na nke a bụ "ebe njedebe" maka Turkey yana enwere ọtụtụ ohere maka ndị njem a. Turkey aghọwo ihe dị mkpa na afọ ndị na-adịbeghị anya na nkwanye ùgwù a maka ndị Palestian nwere njegharị na ndị nnọchi anya haziri ahazi.
Akwụkwọ akụkọ Hürriyet kwuru na nleta ahụ bụ akụkụ nke mbọ Turkey gbalịsiri ike ịkwalite njem na Jọdan, bụ nke Durmaz na ndị Jọdan zukọkwara. Ndi oru mgbasa ozi Turkey nwere obi uto, karia ndi mgbasa ozi nke ochichi dika Yena Şafak. Ọ bụ akụkụ nke nkwado sara mbara maka nsogbu ndị Palestine gafee mgbasa ozi mgbasa ozi na ọha na eze na Turkey.
UNWTO gosipụtara Gastronomy Tourism na Japan
Al Ain International Airport na-anabata ụgbọ elu kwa ụbọchị na Jeddah n'oge Ramadan